Videos MILATARI KELIYA
Videos MILATARI KELIYA sano 3 3 bilood ka hor #433
Gentelmen maalin wanaagsan ,, leeyihiin kursi!
Waxaan isticmaali doonaa Forum MAWDUUC this for Videos MILATARI ISTICMAAL KALIYA ...
Thanks in ay ixtiraamaan in!
Videos MILATARI KELIYA sano 3 3 bilood ka hor #434
Good Maalinta Gentelmen ,,
Ha ku bilaw ah nin Name wanaagsan Dave Groark ...
Dave Groark ina siinaysaa Walk faahfaahsan ee F-104 Lockheed ku Starfighter. Dave sidoo kale wadaagaan sheekooyinka dhowr isaga iyo saaxiibbadiis duulaya ku-F 104 iyo waayo-aragnimada ay ku saabsan. Tani ayaa laga duubay at Aviation Memorial Museum Taariikhda in Tyler Texas.
Aad qaar ixtiraam oo ay leeyihiin kursi oo raac waxa ninka leh & kuu sheegaysa ku saabsan ...
F-104 Starfighter Walk
Ee TT dib gan F -104 Walk Video
Oh ,, sababta aad dhammaan wiilasha wanaagsan ayaa halkan ,, waxaan aad heshay gunno yar ,, waayo ixtiraamka idiin siiyey inaad VETs Military.
"On December 10, 1963, halka jirrabaya Tababaraha aerospace gantaal-qabsiyo NF-104A ah, uu dirqi kaga baxsaday dhimasho markii uu diyaaradda ka baxay gacanta ugu 108,700 cagaha (ku dhowaad 21 miles up) oo ku burburtay. Waxa uu dilay Osoma ammaanka at 8,500 cagaha ka dib shakin dagaalamaya in ay helaan gacanta ku yaraa, la shuqul buu si degdeg ah ka dhicin. In dhacdadan uu noqday duuliyihii ugu horeeyay ee loo sameeyo ejection degdeg ah oo suubban ee cadaadiska buuxda loogu baahan yahay duulimaad sare sare ah. "
Diyaarada ayaa la burburiyay in shilka la raadiyo. Baadhitaan ka dib muujisay in sababta keentay shilka ahaa wareejin ah in ay keentay ka xagal-dhaafka ah ee weerarka iyo la'aanta jawaab diyaaradaha. xagal The-dhaafka ah ee weerarka aan la sababa aqbasho pilot laakiin by xaalad gyroscopic qotomiyey by spooling engine J79 ka dib markii hoos u xidhay for wajiga gantaal ku shaqeeya fuulid zoom ah.
Shilkan ayaa waxaa lagu sawiray in filimka "Xuquuqda Stuff The." Si kastaba ha ahaatee, agaasimaha / qoraaga bedelay inta badan oo ka mid ah xaqiiqooyinka / dhacdooyinka ku xeeran shilka. About waxa kaliya ay xaq u helay ahayd in F-104 sameeyey shil iyo Waxaa lagu tijaabiyay by Yeager.
nin Xayaysiin The ciyaaro Yeager in filimka halligmeen. On Friday, January 14, 1983, filim waxay ahayd in recommence. boodi ayaa la qorsheeyay inuu ku soo bilowdo ahaa ee 10,500 cagihiinna ka Cessna 206 ah, ka diiwaan gashan sida N29173. operator camera The, Randy Deluca, iyo Svec booday oo aan dhacdo, waxay ahayd matoor qiiqa ku guuldareystay in ay ka shaqeeyaan. Sidaas labada qabtay on midba midka kale ilaa ay gaareen 3,500 cagaha.
Waxay kala soocay, ka walba iska wasakheeyey, iyo sii waday in ay lacag la'aan ah-dayrta, iyadoo Deluca lug uu baarashuud ugu weyn ee 2,500 cagaha. Svec, kii sii dhacayay meel siman oo xasilloon, marnaba la geeyay mid ka mid ah Ciidamada Kumandooska uu. Iyadoo booday oo aan qalab ay hawshooda si toos ah, uu saamayn dabaqa lamadegaanka, dilka ah 35-sano jir ah isla.
baaritaan ah Ciidamada Kumandooska hoose iyo reserve labada Svec ayaa muujisay dhibaato ah ma leh midkood, oo markhaatiyaal indhaha ku arkay dhulka ku arkay wax calaamado ah halganka ama dhibaato uu ka qayb. suud uu soo xirtay ma ahaa si gaar ah ay adag tahay in soc oo, marka laga reebo xirto koofiyada madaxa-dheregtaan, wax ka soo baxay oo aan caadi ahayn. In dhamaadka, sharaxaad lama helin geeri dhicis halyeeyga in ka badan 2,000 bootin, inkastoo ay si ballaaran loo arko in qiiqa buriyay isaga miyir iyo awoodin in ay fal.
Chuck Yeager ee Test Flight / Shil In The F-104
Videos MILATARI KELIYA sano 3 3 bilood ka hor #435
Gentelmen maalin Good ,,,
POW Vietnam Fighter Pilot Tony Marshall
Lt Col Tony Marshall (Cirka ee ret.) Saamiyada-aragnimada duulaya F-4 Phantom dagaal-qarax oo ka badan North Vietnam ilaa uu diyaarad ku qarxay, ayaa lagu qabtay iyo adkaystay mashaqadan sida POW ah.
Videos MILATARI KELIYA sano 3 3 bilood ka hor #438
The cabsado F-4 Phantom Gentelmen ,,.
Tani video HD waxbarasho muujinaysaa sida Mareykanka ee loo isticmaalo noocyada kala duwan ee diyaaradaha F-4 Phantom la isticmaalay oo dhan South East Asia 1960s-1970s by United States Air Force ee (Cirka). Phantom waa diyaarad weyn oo xawaare sarre ka badan Mach 2.2. Waxa ka badan pounds 18,000 (8,400 kg) on ​​sagaal hardpoints dibadda qaadi karaan. The F-4 ayaa sidoo kale aad loogu isticmaalaa oo waxay u adeegeen sidii diyaaradda Fadilmo hawada maamulaha waayo labadaba Navy iyo Cirka, oo muhiim u ah in uu dhulka ku-taageero iyo doorka sahan anteenada noqday. Phantom waxa uu leeyahay Gudbey ahaanshaha jet la soo dhaafay US duulay gaadhaan xaaladda xiddiga qarnigii 20th ah. McDonnell Douglas F-4 Phantom II waa tusmo laba-kursiga, mataanaha-engine, dhan-cimilada, diyaaradaha interceptor jet supersonic long-range asal ahaan loogu talagalay Mareykanka by McDonnell Diyaaradaha. Waxaa marka hore soo galay adeega ee 1960 iyo cadaato aadka u la qabsan kara oo by bartamihii-1960s qayb weyn oo baalashooda hawada kala noqday.
Videos MILATARI KELIYA sano 3 3 bilood ka hor #439
Marka la eego oo dhan ,, aad La soo Brig. Gen. Robin da'doodu Gentelmen!
Yaa ahaa Robin da'doodu?
Hero American An - Robin da'doodu
Robin da'doodu (July 14, 1922 - June 14, 2007) ahaa pilot dagaalka ee Maraykanka iyo sarkaal guud ee Air Force Maraykanka. Waxa uu ahaa a "xiddiga xaafuun", iyadoo wadar ahaan guul 16 ee dagaalkii labaad ee dunida iyo dagaalkii Vietnam. Wuxuu ka fariistay 1973 sida Sarreeye Guuto a.
ayuu ina Ciidamada Air Major General Army Robert da'doodu, aqoon ee West Point, iyo wax soo saarka ee barbaarinta ah ee sannadaha hore ee Air Ciidamada Maraykanka Corps, da'doodu u xasilan duuliyaha xunxun ee dagaalka dagaalkii labaad ee dunida. Wuxuu ku sii jiray adeegga sida taasu waxay noqotay Maraykanka Air Force United, inkastoo marar badan iyagoo ah ee la hoggaankooda, oo ahaa mid ka mid ah duuliyayaasha ay jet horyaal. Kacaya in amarka laba baal dagaalka, da'doodu waa ka mid ah taariikhyahanadu duulista arkaa, iyo facooda uu, sida Taliyaha ugu fiican garabka ee dagaalkii Vietnam, oo uu labada xirfadaha hawada-dagaal, oo uu sumcad sida hogaamiyaha dagaalka ah.
Da'doodu u dallacsiiyey in Guuto ka dib markii ka soo laabtay Vietnam, laakiin ma uusan qaban amarka kale ee waaweyn. ka dhiman ee mustaqbalkiisa ciyaareed uu ku qaatay in jagooyinka aan hawl, sida Taliyaha arday ee Maraykanka Force Academy Air iyo sida rasmiga ah ee Xafiiska Ciidamada Cirka Isbatooraha Guud ee.
Heroes Dagaalkii oo cirka - Vietnam Dogfights Robin da'doodu
Videos MILATARI KELIYA sano 3 3 bilood ka hor #440
The ACES ee koonfur bari Asia
diyaarad United States dhulka hawlaha taageerada ee koonfur bari Asia, ayaa sidoo kale u sharaxay sida duuliye diyaaradaha isku si loo baabi'iyo diirada dhulka muhiimka ah sida buundooyinka, Jeelal iyo gaadiidka.
Videos MILATARI KELIYA sano 3 3 bilood ka hor #448
Doofaar Gentelmen The ... Ku raaxayso!
A-10 qaylo II
Maalinta Brrrt Happy Gaarka ah
Warthog GAU-8 BRRRT Strafing Gun waddaa dumiya wadin Humvees
A-10 Warthog anti-taangiga diyaaradaha qabashada cabsado GAU-8 qoriga strafing waddaa on baabuurta humvee wadin si ay u tijaabiso awoodda ay baabbi'in dhaqaaqin oo diirada u guurto.